Vakashela iDwala laseGibraltar | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Gibraltar, Iziqondiso
Uyawuthanda umqondo? Idwala elinamadwala kusezandleni zamaNgisi isikhathi eside kepha uthola izivakashi ezinelukuluku ezivela kuwo wonke umhlaba. Idwala leli limane nje liyidwala lamatshe amancanyana elakhiwa kudala, cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-200 eyedlule, lapho kushayisana amapuleti amabili ama-tectonic. Lo mhlangano uphinde walolonga umcengezi waseMedithera, kwabe sekuba ichibi elinosawoti.
Namuhla ingxenye enkulu yendawo yayo iyindawo yokulondolozwa kwemvelo futhi iyindawo eyingqayizivele yokuzithokozisa kule ndawo yaseYurophu leyo ihlanganisa imvelo nomlando ekunikezweni kwayo kwabavakashi.
1 U-El Peñón
2 Ungafika kanjani eGibraltar
3 Yini ongayivakashela eGibraltar
Itshe ixhunyaniswe nenhlonhlo yase-Iberia yi-isthmus enesihlabathi esikwa ngasikhathi sinye ngumsele. I-limestone futhi ifinyelela cishe kumamitha angu-426 wokuphakama. Kusukela ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX bekusezandleni zeGreat Britain, umqhele owadlula kuwo ngemuva kweMpi Yokulandelana KweSpain.
Sasho ekuqaleni ukuthi Yakhiwa ngemuva kokushayisana kwamapuleti amabili ama-tectonic, i-Afrika ne-Eurasia. Ngemuva kwalokho ichibi laseMedithera elabuye lakhiwa ngaleso sikhathi, ngesikhathi seJurassic, loma futhi kuphela isikhathi kamuva lapho amanzi ase-Atlantic akhukhula umcengezi ongenalutho, edabula umfula ukuze enze ulwandle lwaseMedithera esilwaziyo namuhla.
Kukhona idwala kanye nomugqa, kepha idwala yakha inhlonhlo engena emfuleni etholakala ogwini oluseningizimu yeSpain. Ukubukwa okuvela kule sayithi kumnandi, kakhulu uma umuntu eyazi i-geology futhi azi umlando omatasa wamatshe.
Ukwakheka kwala matshe kungezwe ku ukuguguleka komoya namanzi kunemihume ebunjiwe, cishe ikhulu, akukho okunye futhi akukho okungaphansi. Futhi eziningi zazo ziyizindawo zokuheha izivakashi.
Ungafika kanjani eGibraltar
Ungakwenza ngesikebhe, ngendiza, ngomgwaqo noma ngesitimela. Kukhona insizakalo yomoya ejwayelekile evela eNgilandi, kunjalo. Izindiza zenziwa yiBritish Izindiza, i-easyJet, iMonarqch Airlines neRoyal Air Maroc. Uma useSpain ungafika eJerez, Seville noma eMalaga bese usuka lapho uhambe umzila uhamba ibanga elingeqile ehoreni nasehafu.
Isikhumulo sezindiza sendawo siqhele ngemizuzu emihlanu kuphela ukusuka ethekwini. Ukukhuluma ngetheku ungafika edwaleni ngesikebhe. Kukhona izinkampani eziningana: iSaga Cruises, HAL, P & O, Granc Circle Cruise Line, Regent Seas Seven. Ungasebenzisa futhi isitimela esivela eSpain, eFrance naseNgilandi. Isibonelo, uma useMadrid, uthatha i-Altaria, ebusuku, ulibangise e-Algeciras. Lesi sitimela sinekilasi lokuqala nesigaba sesibili.
Uma ususe-Algeciras, uhamba ngebhasi phambi kwesiteshi sesitimela, esishiya njalo uhhafu wehora uye eLa Linea, okungumngcele waseSpain neGibraltar. Bala uhhafu wehora .. ukusuka lapho, ngoba uwela ukuhamba ngezinyawo. Kulula kakhulu!
Mayelana nemibhalo, uma uyisakhamuzi saseYurophu udinga ikhadi lokuzazisa kuphela kepha uma ungekho, kufanele ube ne- ipasipoti evumelekile. Cabanga ukuthi uma udinga i-visa ukungena e-United Kingdom, uzoyidinga ukuze ubeke unyawo lwakho eGibraltar.
Yini ongayivakashela eGibraltar
Iqiniso ukuthi liyindawo encane kakhulu futhi ungayihlola kalula ngezinyawo, okungenani idolobha kanye neDwala. Ukusuka emngceleni kuya enkabeni ukuhamba kuyimizuzu engama-20, isibonelo, noma ngabe uvakashela i-Nature Reserve kungathatha isikhashana. Okokuhlala kakhulu ungahlala uthatha itekisi noma ikhebulaway. Amatekisi angasebenza njengabaqondisi bezokuvakasha futhi anikele nangohambo lwabo.
I-cableway ibilokhu isebenza kusukela ngo-1966 futhi ikusa esiqongweni seDwala ukuze ujabulele ukubukwa okuhle. Isiteshi esisezansi siseGrand Parade, empumalanga yedolobha futhi eceleni kweBotanical Gardens. Edwaleni amabhasi omphakathi nawo ayagijima.
La IGibraltar Nature Reserve Kusendaweni engenhla yeDwala. Ubona iYurophu, i-Afrika, i-Atlantic, uLwandle iMedithera. Khumbula ukuthi ukuphakama kungamamitha angama-426. Ukusuka lapha ungaya ohambweni futhi uvakashele eminye yemihume ethandwa kakhulu njenge- Umgede weSan Miguel, okuhlale kuthiwe ayinamkhawulo nokuthi ixhuma neYurophu. Iqiniso ukuthi linezindaba eziningi njenge-protagonist, bekuyisibhedlela seMpi Yesibili, futhi amakamelo alo angaphansi komhlaba mahle.
ICathhedral ingelinye lala magumbi futhi ivulekele umphakathi njengehholo lamakhonsathi nama-ballet galas njengoba inabantu abangu-600. Omunye wemihume yi Umgede waseGornham, eyaziwa ngokuba ngenye yezindawo zokugcina zamaNeanderthal. Ngaleso sikhathi kwakungamakhilomitha amahlanu kuphela ukusuka ogwini futhi kwatholakala ngo-1907. Isimangaliso esibaluleke kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi kukhona futhi Imigudu yeSiege, inethiwekhi ye-labyrinthine yamaphaseji asukela ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi kwakuyingxenye yohlelo lokuvikela.
IGreat Siege kwakuvinjezelwa inombolo ye-14 eDwaleni, okunye ukuzama kwabaseSpain nabaseFrance ukuthola kabusha indawo. Kuqale ngoJulayi 1779 kuya kuFebhuwari 1783, iminyaka emine isiyonke. Namuhla ingxenye ye- le mipheme namaphaseji avulekele umphakathi: amamitha angama-300 esewonke futhi kunezimbobo ezithile ezinikeza ukubukwa okuhle kweSpain, i-isthmus uqobo, kanye netheku. Kuyindlela yokuhamba ngomlando.
Ekugcineni, hhayi amaRoma, amaNgisi noma amaSpanish kuphela ahambahamba lapha. Kanjalo nama-Arabhu. Futhi azimfishane kepha yiminyaka engama-701! Kusukela ngalezo zinsuku inqaba eyaziwa ngokuthi Isigodlo samaMoor, kusukela ngekhulu le-XNUMX. ITorre del Homenaje endala yakhiwe ngodaka nangezitini ezindala kepha isamile, iphikisana nokudlula kwamakhulu eminyaka. Uma uyivakashela uzozwa izindaba eziningi futhi bekungaphansi kwayo lapho amaNgisi aphakamisa khona ifulegi lombuso ngo-1704 ukuze angabe esawehlisa.
Ekugcineni, uhambo olunconyiwe: lokho okuthiwa Izinyathelo zaseMedithera. Kuyinto a Ukugijima kwamamitha ayi-1400 Kunzima impela okuthatha ihora nohhafu kuye emahoreni amabili nohhafu. Kunconywa ukuqala ekuseni kakhulu, ikakhulukazi kulezi zinyanga zasehlobo, noma lapho ilanga selizokwehla ukuze lithole umthunzi. Entwasahlobo umzila ugcwele izimbali futhi ubuhle.
Isuka ePuerta de los Judíos, ohlangothini oluseningizimu ye-Natural Reserve cishe ngamamitha ayi-180 ukusuka phezulu, iye e-O'Hara Battery ebangeni elingamamitha angama-419 phezulu esiweni.
Ukubukwa kuyinto efanele ukukujabulela futhi ungathatha ithuba lokuvakashela eminye cuevas ngaphezulu, okwake kwahlalwa ngamadoda angaphambi komlando, ukwakhiwa maphakathi nekhulu lama-XNUMX, amawa giddy, izinkawu futhi amabhethri ezempi iminyaka eyikhulu. Yize kuliqiniso ukuthi iGibraltar akuyona indawo yokuhlala izinsuku eziyishumi nanhlanu, ungachitha izinsuku ezimbili noma ezintathu ujabulela ilanga, ukubukwa, imvelo nokunikezwa kwalo kwezindawo zokudlela nemigoqo.
Indawo yokuhlala? Ungalala emahhotela, ezindlini eziqashisayo zabavakashi futhi unemali encane, ku ihostela lentsha. Ngeminye imininingwane, unganqikazi ukuvakashela iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseGibraltar, Vakashela iGibraltar.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Gibraltar » Vakashela iDwala laseGibraltar